Isu Tinotarisira, Nyika yeAmulets Kuzvipira Kwemagariro
Chikwata cheWorld of Amulets chagara chakabatanidzwa mukuzvipira munharaunda uye kuzvipira kunatsiridza hupenyu nemamiriro enharaunda yatinogara. Zvichida nekupa mari muzvirongwa zvemuno, kuchenesa masango nemabhishi, zvikamu zvemahara reiki, nezvimwe ..., kwedu kuvambwa nhengo dzakaratidza kufarira kukuru uye kunetseka mune izvi zvinhu.
Mushure megore rakaomesesa kune vazhinji venyu nekuda kwedenda recovid-19, takafunga kutora kuzvipira kwedu munharaunda kuwedzera. Kunyangwe 2020 rave riri rakaoma uye rakaoma gore kwatiri zvakare, tinofunga kuti, sekambani inoenderana nemagariro, WOA inogona kuita zvakawanda. Saka isu takatanga kuongorora nzira yakanakisa yekubatsira nharaunda yedu nenzira inoshanda kwazvo.
Nezvikonzero zvakawanda uye zvido zvave zvichinetsa kuwana chikonzero chekutsigira (zvakare nekuda kwekukanganisa kwekufamba nekuda kwedenda) zvekuti pakupedzisira takazofunga kutsigira 1 sangano rinofukidza nekutsigira zvikonzero zvakawanda pasirese.
Tiri kutaura pamusoro pesangano rakanyatsojeka rerubatsiro: Lions Club International. Isu tinonzwa kuti kuburikidza neLions Club International Foundation (LCIF) tinogona kusvika kune vanhu vazhinji pazvinokosha (unogona kuwana rumwe ruzivo nezve Lions Club pano)
Pakati pezvakakonzera LCIF inotsigira ndezvechokwadi covid-19 denda kupindura, kurwisa chirwere cheshuga, kuchengetedza kuona, kupa simba vechidiki, kuchengetedzwa kwezvakasikwa, uye zvimwe zvakawanda.
Gore rekupedzisira remari, LCIF yakapa zvipo mazana matatu nemakumi matatu nemakumi matanhatu, inokwana kudarika US $ 1,360 miriyoni.
Asi mari iyi inoda kubva kune imwe nzvimbo.
WOA yakafunga kutanga chirongwa chezvemari mukubatsira LCIF nekupa 1 € pamutero wega wega unoitwa panzvimbo yedu kutsigira zvikonzero zveLions Club Foundation. Izvi zvikonzero zvinogona kuve zvemuno kana zvepasi rese.
Kubva muna february 1 2021 isu tichatanga kupa pakupera kwemwedzi wega wega 1 € kune yega odha yakaitwa pane yedu yepamutemo webhusaiti uye Etsy chikuva chakabatanidzwa. Uku kungori kutanga nekuti isu tinoda kusvika kune gumi muzana yezvipo zvekutengesa pakupera kwegore. Mipiro yese ichaburitswa papeji ino kuti ive pachena uye inogona kubvunzwa kuLions Club International.
Ndinokutendai nekutenga kuWorld of Amulets uye nekubatsira vanhu kutenderera pasirese.
Karenda Yemipiro 2021
Mwedzi Cause dhonesheni
Kukadzi Kenza yemwana $189
Kurume Shumba Club Valencia $173
Kubvumbi Zuva repasi + Shumba Kirabhu Nomads $149
Chivabvu Shumba Kirabhu Vanofamba-famba
Chikumi Sightfirst & Leaderdogs yemapofu
Chikunguru Shumba Kirabhu Vanofamba-famba
Nyamavhuvhu chirwere cheshuga
Gunyana Njodzi Yokubatsira Mari